Rising Voices tao amin’ny Global Voices Citizen Media Summit 2010 tao Santiago, Shily (Ampahany 1) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2019 2:51 GMT
Tany ampiandohan'ny volana May 2010 no natao ny Global Voices Citizen Media Summit 2010 (Vovonamben'ireo Olontsotra Mpampita Vaovao ao amn'ny Global Voices) tao amin'ny Tranombokim-panjakana ao Santiago ao an-drenivohitr'i Shily. Maherin'ny 200 ireo olona avy aminà firenena 60 tonga nanatrika ilay vovonana, izay voarakotra tsara tokoa teny anaty fampahalalambaovao. Tetikasa efatra avy amin'ny Rising Voices no nampahafantarina nandritra ny andro roa tao amin'ilay vovonana.
Tamin'ny andro voalohan'ny vovonana (6 May 2010) Nat Nyuan Bayjay, mpitantana ny tetikasa Ceasefire Liberia no nanintona ny sain'ny mpanatrika tamin'ny alalàn'ny fanolorany feno fahavitrihana. Ceasefire Liberia, tetikasa multimedia iray, dia mamoaka tatitra fampahalalambaovaon'olontsotra avy eny ifotony mba tsy haha-tompontrano mihono ireo Liberiàna am-pielezana. Ito ny lahatsary iray tamin'ny fanolorany izay nakarin'i Jakub Gornicki ho ao amin'ny YouTube :
Azonao atao ny mamaky famintinana fohy tamin'ilay fanolorany ato.
Taoriana kely tamin'io andro io, i Otgonsuren Jargal nampahafantatra ny Nomad Green ho an'ireo mpanatrika izay tsy dia nahafantatra loatra momba an'i Mongolia. Nomad Green dia manofana ireo Mongoliàna olontsotra mpanao gazety hahay ny fomba fampiasàna ireo fitaovana media sosialy mba hitaterana amin'ny fiteny maro ireo vaovao momba ny tontolo iainana. Ito ny famintinana fohy ny fanolorana nataony .
Tamin'ny andro faharoan'ny vovonana (7 May 2010) Pablo Flores avy any Orogoay no nampahafantatra ny tetikasa Blogging Since Infancy (Mibloagy hatramin'ny fahazazàny). Mba handrisihana ireo ankizy nahazo solosaina finday handray an-tànana ireo fitaovan'ny media sosialy, toy ny fanoratana bilaogy, nikarakara andiana atrikasa ny Pablo Flores avy amin'ny Ceibal, ilay masoivohom-panjakana misahana ny fitsinjarana ireo solosaina finday OLPC ao Orogoay, sy fifaninanana manoratra bilaogy . Ito ny famintinana fohy ny fanolorany.
Yesenia Corrales nampahafantatra ho an'ireo mpanatrika ny atao hoe HiperBarrio, vondrona fanentanan'ireo bilaogera kolombiàna. Mba tsy hidirana amin'ny herisetra, ireto bilaogera ireto dia mamoaka tantaran'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo sy mandrafitra sarintany ifandrimbonana. Ito ny famintinana fohy an'ilay fampahafantarana.
Ito ny fanambatambarana ireo lahatsary avy tao amin'ilay vovonana, nataon'ny Biblioteca del Congreso Nacional de Chile:
26 Septambra 2018Mediam-bahoaka